सन्दिपले एकै दिन दुई करोड कमाएपछि - Kavre Online
सन्दिपले एकै दिन दुई करोड कमाएपछि
काठमाण्डौ : नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ‘द हन्ड्रेड क्रिकेट’ प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन् । आइतबार राति भएको ड्राफ्टमा सन्दीपलाई ओभल इन्भिन्सिबल्सले टिमले एक लाख पाउण्ड (एक करोड ४६ लाख नेपाली रुपैयाँ) मा खरिद गरेको छ ।
टिमले पहिलो राउण्डमा वेस्ट इण्डिजका सुनील नराइनले लिएको थियो भने दोस्रो राउण्डमा इंग्ल्याण्डका साम बिलिङ्स र नेपालका सन्दीपलाई छानेको थियो । बेलायत र वेल्समा आयोजना हुने प्रतियोगिता २०२० को जुलाई १७ तारिखदेखि अगस्ट १६ तारिखसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
‘द हन्ड्रेड’मा छानिएपछि सन्दीप लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत नेपाल र नेपालीकाे अर्को सपना पनि पूरा भएको उल्लेख गरेका छन् । सन्दीपले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘नेपाल र सुन्दर नेपालीका लागि अर्काे सपना पूरा भएको छ । ओभल इन्भिन्सिबल्सको सदस्य हुन लाग्दा गर्ववान्वित भएको छु, मेरा लागि प्रार्थना गर्ने माया र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
ड्राफ्टमा सन्दीपभन्दा बढी आधार मूल्य रहेका खेलाडीमा वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेल, दक्षिण अफ्रिकाका कगिसो रबाडा तथा श्रीलंकाका लासिथ मालिंगा रहेका छन्। त्यस्तै अस्ट्रेलियाका तीन खेलाडी स्टीभ स्मिथ, मिचेल स्टार्क र डेभिड वार्नर पनि बढी आधार मूल्य भएका खेलाडी हुन्। उनीहरूको आधार मूल्य १ लाख २५ हजार पाउन्ड रहेको छ।
यसअघि सन्दीप नोभेम्बर १५ देखि २४ सम्म हुने टी–१० प्रतियोगितामा कर्नाटका टस्कर्रसमा अनुबन्ध भएका छन्। उनलाई कर्नाटकाले ४५ हजार अमेरिकी डलरमा आफ्नो टिममा आबद्ध गराएको हो।
इङ्ल्यान्ड र वेल्सका विभिन्न आठ सहरको नामका क्लबहरूले प्रतियोगितामा भाग लिने छन्। सबै क्लबले ३/३ जना खेलाडी छानिसकेका छन्।
‘द हन्ड्रेड’ कस्तो खेल हो ?यो बिल्कुलै क्रिकेट खेलमा नयाँ फम्र्याट हो। यसमा हरेक इनिङमा १ सय बल हुन्छ। १० बलपछि स्टम्प परिवर्तन हुन्छ। बलरले एकपटकमा ५ वा १० बल गर्न पाउँछ भने एक खेलमा २० बल मात्र गर्न पाउँछ। यसैगरी २५ बलको पावरप्ले खेल हुन्छ। पावरप्ले अवधिमा दुई जना फिल्डर ३० यार्डभन्दा बाहिर बस्न पाउँछन्।
Prevनयाँ मोडेलमा आएको ३५० सिसिको बुलेटको दाम ह्वातै घट्यो, हेर्नुहोस कती मुल्य ?
Nextहिमानी शाह लेख्छिन् – रुदैनन् कहिले जल्नेहरु !! रुन्छन् त केवल जलाउनेहरु !!
रवि लामिछाने लगायत ३ जनालाई ५ वर्ष जेल सजाय र ५० हजार जरिवानाको माग
गौतम बुद्धको मुर्तिबाट निस्कियो मान्छेको शरीर, हृदय हल्लाउने तथ्य बाहिर आएपछि भाइरल
अघोर बाबाकी श्रीमतीको कालो कर्तुत, ७० लाखमा आफ्नै श्रीमान बेचेको आ*रो*प प्रमाणसहित आईन यी महिला (भिडियो हेर्नुस)